ရေ & ငါး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ရေ & ငါး
ရေ & ငါး
Posted by ရွှေ မင်း သား on Jun 22, 2012 in Photography | 24 comments
ကျနော့် ငါးကတော့ နည်းနည်း စွာတယ် ဗျ။
မှန် အပြင်ဘက်ကနေ လက်ရောင် ပြလိုက်တာနဲ့ ကိုက်တော့ မယ့် ပုံနဲ့ ပါးစပ်ကြီး ဟ ပြီး လိုက်တော့ တာဘဲ…..
ငါးသံပုရာပေါင်း လုပ်စားပလိုက်ရလျှင်တော့ကွာ …. ငှဲ ငှဲ ငှဲ
သက်သက်ရန်စထားတာပေါ့ .. ဟိဟိ …
ဒါဆို mamee ၊ သစ္စာလင်းနဲ့ water fish တို့ .. နှစ်လုံးပြူးကိုင်ပြီး ချက်ချင်းရောက်လာတော့မှာပဲ … ခွိခွိ
အန်တီ အိတုံးရယ် ကျနော် အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံပါ့မယ်။ ကျနော် ဘယ်လိုမှ ရန်မစ ရဲကြောင်းပါ။ တကယ် အမှန်ပြောတာပါ။ ဘယ်လို နည်းနဲ့မှ ကျနော် ရန်စဖို့ မစဉ်းစားခဲ့မိပါဘူး။ စိတ်ကူးလေးနဲ့တောင် ရန်စ မကြည့်ရဲပါဘူး။ တကယ်ပြောတာပါဗျာ….. နောက်ပြီး ဘေးမှာ ကိုယ်ရံတော် တပ်မှုးလေးတွေ ရှိနေရင် ဒုက္ခ ၊ ပြောရင်းနဲ့ တောင် ကြက်သီးတွေ ထလာပြီ၊။
အပေါ်ပုံထဲက ဘာလေးတွေလဲ သိဝူးးးးးးးးးးးးးးး
ရေငါးလေးက ချစ်စရာလေးနော် အာဟိ :grin:
lucky fish ဆိုတာမျိုးက လောပန်တွေမွေးတာများတယ်တဲ့။
Water & fishပေ့ါနော် ………. ကိုကျန်စစ် ဒ့ါပုံလက်ရာတွေကတော့ တကယ့်အံ့မခန်းပါပဲ …… လက်ရာပိုင်း မှာရော အတွေးအခေါ်မှာပါ ကောင်းလိုက်တာ ………
ရှင်းသန့် နွယ် says:
ရေရှိလျှင် ငါးရှိသည် ။
မြေရှိလျှင် ……..ရှိသည် ။
ရေထဲက ငါးကို ချက်စားဘို့ ပြောပါ ။
မြေပေါ်က ……..ကို ထွက်သွားဘို့ ပြောပါ…..။
ရေငါးထိလို့ကတော့ ဖရဲသီးက ငြိမ်ခံမယ်မှတ်နေသလား
သံပုရာနဲ့မပေါင်းခင် လူခေါင်းကွဲသွားမယ် ဘာမှတ်နေလဲ
ကိုရွှေမင်းသားရေ ရေငါးပုံတင်တယ်ဆိုလို့ ကြည့်လိုက်ပါတယ်..
တိုမဲဥက အောက်ဆုံးကရေငါးလေးကိုချစ်ချာလေးတဲ့ ….
တိုမင်းသားရေ အဲဒီငါးလေး မဲဥကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါလား………
အဲဒီတီလားဗီးယား ငါးကတော့ ငါးသံပုရာဆိုရင်တော်တော် မိုက်မယ်ဗျ…
နာ့ ဖြဲမလေးက နာ့တွေ့တာနဲ့ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ကိုလာလာကြည့်တယ်…
ပထမတော့ ရေငါးပုံတင်မယ်ဆိုတော့ ဘုမသိဘမသိနဲ့ ကြောင်သွားတယ်ဗျာ…ဟီးဟီး
ကျွန်မတုံးတာကိုမရှက်လို့ မေးလိုက်ဦးမယ်။ ဘာဖြစ်လို့ တော်တော်နောက်တယ်လို့ ပြောကြတာလဲဟင်။
အပေါ်ကပုံတွေက oxygen ပိုက်ကထွက်တဲ့ ရေပလုံစီလေးတွေနဲ့ရေစီးကြောင်းလေးတွေကို မတ်ခရို abstract ရိုက်ထားတင်ထင်ပါ့။ တတိယပုံလေးကိုအတော်သဘောကျပါတယ်။
လိပ်ပြာပုံ တစ်ကောင်လောက် ရိုက်ပြပါရား..
အဖိုးကြီးလိပ်ပြာလား။ အဖွားကြီး လိပ်ပြာလား။
အောက်ဆုံးပုံက ရေငါးတော့ ကြိုက်ဒလယ်ဗျာ…
အနိစ္စ အနိစ္စ အနိစ္စ
(မိုက်ကယ်ပု မလာခင် ကြိုပြောသွားသည်)
ရွှေမင်းသားရဲ့ ငါးက ဘာငါးပါလိမ်ါဗျာ။
မွေးချင်တယ် ကယိကထများလို့ ပါ။
ကြည့်ရတာ အရသာ နည်းနည်းပေါ့ သလိုဘဲ ကိုကိုကျန်ရေ….
အဲဒါလေး ကျနော်လဲ စိတ်ဝင်စားလို့ ရှင်းပြပေးပါအုန်း…
နောက်ပီး စည်ပင်က မီတာစာရွက်ကို အားကျလို့များ ရေစာတွေ အဲလောက်တောင် ထည့်ထားရတာလား ဆြာရယ်….
မောင်ရင် ပို့စ်တင်တိုင်း Comment တွေကို Reply ပြန်မပေးဘူးနော်။
ဒါကြောင့် မန်းရတာ အားမရှိပါ။
တီချယ် ကြီး မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျ။
တီချယ် ကြီး ပြောသလိုပါဘဲ ကျနော် Reply လုပ်တာ အတော် ကို နည်းပါတယ။် ဒါပေမယ့် ကျနော်တင်ထားတဲ့ ပိုစ်တွေကိုတော့ အမြဲ ပြန်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်မန့်တွေလဲ ပြန်ဖတ်ပါတယ်။ ကျနော် က အပြင်မှာလဲစကားနည်း တဲ့သူမို့လို့ Reply ပြန်ဖို့ အားနည်း နေတာ ပါ။ ဒါပေမယ့် အခု ပိုစ့်က စပြီး ကျနော် ဂရုတစိုက် Reply ပြန်ပေးပါ့မယ်။ ကျနော် ကိုယ်တိုင်ကလဲ ဒီလိုတုန့်ပြန်မှု အားနည်းတာ Reply ပြန်တာအားနည်းတတ်တာကို ပြင်ချင်နေပါပြီ။
ကိုရဲစည် ရေ…… ကျနော့် ပုံတွေ ကြည့်ရတာ အရသာ နည်းနည်းပေါ့မှာပေါ့ အမြည်းဘဲ ပါတယ်။ ရေနွေးကြမ်းမှ မပါတာ နော်….။
ပုံလေးတွေ ကို စပိ နဲ့ အပါချာ ကို ကစားပြီး စမ်းရိုက်ထားတာပါ။ အလုံးလေးတွေ ဖြစ်အောင် စပိ အနည်းဆုံး ၃၂၀၊ တချို့ပုံတွေ ဆို ၅၀၀ ထိတင်ပြီး ရိုက်ထားပါတယ်။ ISO ကတော့ ၄၀၀၀ လောက်ထိ တင်ထားတယ်။ အပါချာ က တော့ ၄ လောက်နဲ့ ရိုက်တယ်။
နောက်ပြီး အဆင်းတွေ ထွတ်အောင် ကျတော့ ISO ၂၀၀၀ စပိ ကို ၅ လောက်ထားတယ်၊ အပါချာ ကို ၃၂ အထိ ထားရိုက်ပစ်လိုက်တယ်။
ဟိုလို စမ်းရိုက် ဒီလို စမ်းရိုက်ပေါ့…… နော် ၊ ။ ကျနော် လဲ သင်ယူနေဆဲဆိုတော့ စိတ်ကူးပေါက်သလို စမ်းရိုက်ထားတာပါ။ ရိုက်ရတာတော့ မလွယ်ဘူးဗျ ။ လက်ကို ညောင်းလို့……. တဘက်က ကင်မရာ ကိုင် နောက်လက်တဘက်က လက်နှိပ် ဓါတ်မီး နဲ့ ရေကို ထိုး။ ကင်မရာထဲက ရေကို ကြည့်လိုက် အပြင်က ရေကို ကြည့်လိုက်နဲ့ …. ပျော်စရာတော့ ကောင်းသားဗျ။
သကြားလုံးပြောသလိုဘဲ မာခရို နဲ့ ရိုက်ထားတာပါ။ ငါးပုံကတော့ ၂၄-၁၀၅ နဲ့ ရိုက်လိုက်တယ်။
ရေစာ တွေ အများကြီး တပ်ထားရတာက လှမလားလို့ စမ်းကြည့်တာပါ။
ရေပူပေါင်း တွေ ရဲ့ idea ကို လေးစားပါတယ်ဗျာ … တတိယ မြောက် ပုံလေးကို ကြိုက်တယ်ဗျို့ …။
ငါးကစွာတယ်သာပြောတာ ပါးစပ်ပိတ်နေတယ် စွာနေတဲ့ပုံလေးတင်ပေးပါအုံး ပုံလေးတွေ ကလှပါတယ် မောင်လုလင်နဲ့ အမြင်ခြင်းတူသွားပြန်ပြီ တတိယမြောက်ပုံးလေးကိုစနိုးလည်းကြိုက်ပါတယ်။
မနှင်းဖြူလေးပြောသလိုပါဘဲ တင်ပါအုံး ဆရာရေ။